ko htike's prosaic collection: စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေး၊ အငတ်ဘေးနဲ့ နအဖတို့ လိမ်လည်မှုများ
စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေး၊ အငတ်ဘေးနဲ့ နအဖတို့ လိမ်လည်မှုများ
ယခုတလော တော်တော်လေး အပြောများနေတာက နအဖက သူတော်ကောင်းပုံစံနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလို့ သူတို့က တောင်းဆိုထားတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်မခံတော့သယောင်၊ တိုင်းပြည်မှာ သူတို့လောက် အရာရာကို သဘောထားကြီးစွာ ဆက်ဆံတဲ့သူမရှိ သယောင် လုပ်ပြနေတာများ၊ ကြားရသူအဖို့ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီး သူတို့ရဲ့ အရှက်မရှိတဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်ရ၊ နားထောင်ရတာ နအဖ ကိုယ်တိုင်တော့ မသိဘူး၊ ကျွန်တော်တော့ သူတို့အစား ရှက်မိပါတယ်။ (နအဖတွေ မရှက်တတ်တာကတော့ အစကတည်းက သိပါတယ်။)
နအဖနဲ့ အတူ မြတ်ခိုင်ဆိုတဲ့ လူကလည်း လျှက်တစ်ပြတ်ဆိုပြီး အရှက်မရှိလုပ်နေတာတွေလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။ သေရင် ပြီးပြီဆိုတဲ့ မြတ်ခိုင်တစ်ယောက် ငွေကြာရံက ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးကို သွားဖူးပြီး သူ့ အရှက်ပြတ်တဲ့ ဂျာနယ်မှာ အချပ်ပိုဆိုပြီး ပြည်သူတွေကို စေတနာနဲ့ ငွေကြာရံ ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးဖို့ လုပ်ပေးထားတာ သူမို့လို့ မျက်နှာပြောင် တိုက်ရဲတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ သေရင်ပြီးပြီ အယူဝါဒ ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့။
ဒီမိုကရေစီ မရရင် မြို့တော် ခန်းမရှေ့မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဓါတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ သတ်သေ ပြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်း သံဃာတော်တွေက ပြည်သူတွေရဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုတဲ့ တစ်ပွဲလုံး၊ သံဃာတွေ အသတ်ခံနေရတဲ့ တချိန်လုံး ငြိမ်နေပြီးမှ အခုမှ နှစ်ဖက်လုံးက မျိုးချစ်စိတ်၊ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီး သံဃာတွေ နအဖ လက်ချက်နဲ့ သေနတ်စာမိပြီး ပျံလွန်တော် မူခဲ့ရတာကို အတိတ်မေ့သလို မေ့ပြနေပါသေးတယ်။ မဆလ တစ်ခေတ်လုံး တိုင်းပြည်ကို ချစ်ပြခဲ့ပြီးပြီ၊ အခုလည်း နအဖအချိန်အထိ လိုက်ချစ်ပြနေသေးတာလားမသိ။ သူတိုင်းပြည် ချစ်ပုံကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက် ရင်လေးစရာပါပဲ။
ဖမ်းတာခံထားရပြီး အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အကြောင်းပြန်သင့်ပါတယ်ဆိုပဲ။ ပြောတတ်လိုက်တာကွယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးရမလို နအဖ ဆောင်းပါးရှင်တွေရဲ့ တော်ချက်က ကမ်းကုန်ပဲ။ မကြာခင်ကပဲ ပြောသွားတာရှိသေးတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မရှိပါဘူးတဲ့။
လိမ်လိုက်တဲ့ ထောက်ခံပွဲတွေကလည်း အမျိုးမျိုး နေရာအနှံ၊ ပြည်သူတွေကို ဒီလိုနည်းနဲ့ ဒုက္ခပေးပြီး နိုင်ငံတကာကို မျက်လှည့် ပြဖို့ ကြိုးစားတာတွေ ရပ်လိုက်ပါတော့။ ပြည်သူတွေ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်း မယုံပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့က နိုင်ငံရေးဆိုပြီး လုပ်လာတာ ၁၉ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက ခေါင်းဆောင်းတွေက နိုင်ငံရေး လုပ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ရာချီနေပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ မတော်တခေါက် နိုင်ငံရေး ဦးနှောက်လေးတွေနဲ့ လိမ်နေတာ မရှက်ကြဘူးလား။ ၅ နှစ်သား ကလေးက လူကြီးတစ်ယောက်ကို လက်ထဲမှာ အကြွေစေ့ ဖွက်ပြီး ဘယ်မှာလဲ မေးတာကို၊ လူကြီးက ကလေးပျော်အောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မရှိတဲ့ ဘက်ကို ရွေးပြလိုက်တာကို `ငါ့ကိုယ် ငါ ဟုတ်လှပြီ ထင်မနေပါနဲ့´။
ခင်ဗျားတို့က ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲလို့ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြတာကို ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲ့ရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့ အဖြေတစ်ခုနဲ့ ထွက်မလာပဲ ကြံဖွတ်တွေ၊ စွမ်းအားရှင်တွေ၊ ၀ါးရင်း ဒုတ်တွေ ချောဆွဲထားတဲ့ ဒိုင်နာ ကားတွေနဲ့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တိုင်းပြည်ဘာသာသာသနာ ကောင်းစားရေး လိုလားတဲ့ သံဃာတော်တွေက မေတ္တာထားဖို့၊ အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြေရင်းဖို့ ပြောတာကို စစ်တပ်က သေနတ်တွေနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်ရုံနဲ့ ဒီပြဿနာတွေ အေးချမ်းသွားမယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ နအဖတွေထင်နေလား။
သေနတ်နဲ့ ရှင်းလိုက်လို့ ငြိမ်သွားတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ အထွေထွေ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းနဲ့ အငတ်ဘေးက ကပ်လိုက်လာတာကို ခင်ဗျားတို့ မသိနိုင်တာပဲလား၊ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာလား မတွေးတတ်တော့ဘူး။ ပြည်သူတွေ စီးပွားကျပ်တည်းတဲ့ ပြဿနာကို ခင်ဗျားတို့ အခု အထိ မဖြေရှင်းသေးဘူး၊ မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူး။ သံဃာတွေသတ်၊ လူတွေ သတ်လိုက်တာပဲ ခင်ဗျားတို့မှာ နာမည်ဆိုးတိုးလာတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ထင်နေသလို ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်း၊ လူတွေကို သတ်လိုက်ရုံနဲ့ တိုင်းပြည်အေးချမ်းသွားမယ် ခင်ဗျားတို့ နအဖတွေ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ ရမယ် ထင်နေရင်မှားသွားလိမ့်မယ်။ မကြာခင် အချိန် ပိုင်းအတွင်းမှာ မမြင်ရတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲ တစ်ခု တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ နအဖတွေ ခင်ဗျားတို့သွားရမယ့် လမ်းကိုသာ အခုတည်းက ရွေးထားပေတော့။ အကောင်းလား အဆိုးလားဆိုတာ၊ ကိုပိုင်လမ်းကို ကိုယ်ရွေးရတော့မှာ။
အခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေးမှာ သံဃာတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရတာ၊ ရန်ကုန်က သံဃာတွေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ နအဖတွေ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာလို့ တွေးထင်နေကြလား။ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာက ဒီတော်လှန်းရေးကြီးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကြီး တစ်ခုလုံးကို နအဖက စစ်ကြေငြာလိုက်တဲ့ပွဲပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့လို (၁၉) နှစ် အိုးနင်း ခွက်နင်း တည်ထောင်လာတဲ့တဲ့ နအဖဆိုတဲ့ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်သမား တစ်စုက နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် တည်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယှဉ်ပြီး မိုက်တော့မလို့လား၊ သေချာတွေးကြည့်ကြဦးနော်။
ခင်ဗျားတို့ နအဖတွေ၊ မီဒီယာတွေ ဘယ်လိုပဲ အရှက်မရှိလိမ်ညာနေကြပါလေ့စေ ... ပြည်သူတွေက သိတာတစ်ခုပဲ ရှိတယ်၊ စေတနာ အမှန်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကောင်းစားစေချင်ရင် ၁၉ နှစ် မကြာဘူး၊ သံဃာတော်တွေကို မသတ်ဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို ဖမ်းမထားဘူး။ အဲဒါ သေချာတဲ့ အချက်တွေပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တွေကို ချွင်းချက် မရှိ မလွှတ်ပေးသေးသ၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေး အော်နေတာတွေကို ဘာမှ တွေးစရာ မလိုပဲ လုံးဝ မယုံဘူးဆိုတာပါပဲ ခင်ဗျာ။
I'm glad you wrote this. They don't deserve to be our leaders. The only thing they deserve is "A short drop andasudden stop". They are nothing but murderers and thieves who are killing and stealing from us.Day after day, they are getting richer and we are getting poorer.They are throwing lavish parties for their daughters while we are starving to death.And yet they compare themselves as our parents.If they were my parents,I won't mind killing them and go to hell. They are much worse than animals.I hope they die in the worst possible way.And when they die, I hope they rot and burn for eternal in hell.But I very much dout that hell would accept them.
25 October 2007 at 11:35
26 March 2009 at 04:27
自拍美女聊天室 s383自拍美女聊天室 視訊聊天自拍美女聊天室裸體美女台灣美女寫真貼圖區電眼美女小遊戲玩弄av美女泳裝美女寫真av美女真人美女辣妹鋼管脫衣秀手槍美女賞圖波霸美女小遊戲白虎美女圖庫一夜情貼圖一夜情聊天Google,網上論壇東東成人論壇WO,WO,論壇18禁地論壇Mr.愛愛聊論壇玫瑰公爵成人論壇荳蔻情色論壇exBT成人論壇亞洲情色論壇辣辣情色論壇激突綜合論壇gogobox論壇伊莉論壇討論區不夜城情色論壇日本情色論壇視訊辣妹0509免費 視訊聊天秀洪爺視訊網性感妹妹等你喔視訊聊天室入口激情挑逗聊天室視訊聊天頻道視訊聊天都會男女視訊聊天免費觀看視訊辣妹脫衣秀限制級a片情色電影院美女短片免費試看限制級影片自拍情色影片下載18禁成人影音線上視訊聊天網辣妹視訊聊天網限制級電影即時通視訊大奶美女視訊本土辣妹視訊即時通成人視訊成人視訊交友聊天視訊錄影熟女視訊聊天免費辣妹視訊聊天網網友情聊天室上班族偷情聊天室已婚上班族聊天室080心悸動聊天室美眉影音視訊聊天室夜未眠成人影城☆♀ 18成人 ☆♀免費下載成人短片免費真人視訊辣妹一對多視訊聊天即時視訊聊天網路視訊聊天臺灣18歲成人小弟弟成人娛樂小潘潘成人無碼片夜激情成人聊天室免費視訊美女網成人愛情交易所線上交友網百分百成人圖日本av女優影片無碼av女優女優寫真av女優介紹sex女優王國免費a片觀看線上aa片免費看免費線上a片免費A片線上下載情人視訊聊天室情色 後宮電影院SEX情色免費AV女優-線上視訊女優天堂AV女優-無碼A片女優王國情色遊戲女優色情自拍女優星球線上a電影直播女優探索網免費色倩短片觀賞色美媚部落格嘟嘟免費試看短片aa 片試看激凸成人論壇綜合論壇台灣情色網小老鼠米克情色網震撼情色論壇櫻桃不夜城亞洲情色風暴論壇歐美女優台灣情色咆嘯論壇kk69視訊俱樂部免費漫畫帝國洪爺sex520貼片小弟弟貼影片區美美色網貼片區一葉晴貼影片Show-LIVE影音視訊成人電影下載Ａ片免費a片網站Ａ片,免費a片網站女優網免費線上a電影免費性短片欣賞免費a片網站免費色情a片天堂
4 April 2009 at 17:40
21 October 2009 at 04:05